Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Painkillers (1) အနာသက်သာဆေးများ (၁)
Analgesic drugs ဆေးတွေက ဘေးအဖျားအနား အာရုံကြောတွေဖြစ်ဖြစ်၊ ဗဟို အာရုံကြောစနစ်ဖြစ်ဖြစ်ကို သက်ရောက်စေကြတယ်။ ဆေးသဘောချင်း မတူကြသလို နာပုံနာနည်းမတူရင် အနာသက်သာဆေးလဲ ရွေးပေးရတယ်။ ဘယ်လောက်နာသလဲအပေါ်နဲ့ အနာအမျိုးအစားအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ Paracetamol (Acetaminophen) (ပါရာစီတမော)၊ (NSAIDs) (စတီရွိုက်) မပါတဲ့ အနာ-အရောင် သက်သာဆေးတွေ နဲ့ Opioid drugs ဘိန်းသဘောပါတဲ့ဆေးတွေဆိုပြီး ရှိတယ်။
• COX-2 inhibitors တွေက NSAIDs တွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို သက်သာအောင် တီထွင်ထားတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။ Rofecoxib နဲ့ Celecoxib တွေဖြစ်တယ်။ ထိရောက်တာမှာ တူပြီး အစာလမ်းက သွေးယိုမှာ သက်သာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း လေ့လာမှုတွေအရ နှလုံးနဲ့ ဦးနှောက်ကို သက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တာ သိလာရတယ်။ Rofecoxib (Vioxx) ကို ရောင်းခွင့်မပြုတော့ဘူး။ Celecoxib ထဲမှာ (ဆာလ်ဖါ) ပါတယ်။
ဆရာဝန် သတိပေးတာ လိုက်နာပါ
• ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း တိတိကျကျ သုံးစွဲရမယ်။
• လိုအပ်တယ်လို့ ဆရာဝန်ကညွှန်ရင် အချိန်ဆွဲမနေဘဲ သောက်ပါ။
• ရက်တိုအတွက်သာ သုံးပါ။
• ကော်ဖီ၊ (ကိုလာ)၊ ဖျော်ရည်၊ နွားနို့၊ လဖက်ရည်တွေနဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့။
• Paracetamol နဲ့ အရင်စတာ သင့်တယ်။ ဆေးအဆက အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်တယ်။ နာတာလဲ သက်သာမယ်၊ ဆိုးကျိုးလဲ နည်းမယ်။
• တချို့မှာ အနာသက်သာဆေးတမျိုးက ပိုသက်သာစေတာဖြစ်နိုင်တယ်။
• အစာလမ်းမှာ သွေးယိုလာမှာကို အထူးသတိထားရမယ်။
• သွေးယိုစေနိုင်တာက Warfarin သွေးကျဲဆေး၊ Steroids (စတီရွိုက်ဆေး)၊ Low-dose Aspirin နှလုံးကို ကာကွယ်ဘို့ သောက်ရတဲ့ (အက်စ်ပရင်) ဆေးတွေနဲ့ အတူသောက်ရင် ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Myocardial infarction (MI or heart attack) or Stroke ဖြစ်မှာကိုလဲ သတိထားရမယ်။
• Rheumatoid arthritis (ရူမတွိုက်) လေးဘက်နာ၊ Osteoarthritis အရိုး-အဆစ်ရောဂါ နဲ့ Chronic back pain နာတာရှည် ခါးနာရောဂါတွေကိုတော့ ရက်ရှည်လိုမယ်။
• Aspirin (အက်စပရင်) ကို အသက် ၁၆ နှစ်အောက်မပေးသင့်ဘူး။
Over-the-counter Pain Medicine ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ အနာသက်သာဆေးများ
(၁) Over-the-counter Pain Medicine ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေ နဲ့ (၂) Prescription Pain Medicine ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့သာ ဝယ်ရတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေလို့ ၂ ပိုင်း ခွဲထားပါမယ်။ Pain relief score အနာကို သက်သာစေတဲ့ အဆင့် (၁) ကနေ (၁၁) အထိရှိတယ်။ (၁) က အနိမ့်ဆုံး။
1. Aspirin (Acetylsalicylic acid) = NSAID
Dose = 81 mg - 325 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၁
ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါ သာမန်ကိုက်ခဲခြင်း၊ နာခြင်း၊ အအေးမိ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကြွက်သားနာ၊
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အလာဂျီရခြင်း၊ ပန်းနာ၊ အစာအိမ် သွေးယိုခြင်း၊ Reye's Syndrome (ရိုင်း-ဆင်ဒရုမ်း)၊
2. Acetaminophen (Excedrin, Tylenol, Paracetamol)
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၂
ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အဆစ်နာ၊ (ရူမက်တစ်) ရောဂါ၊ အရိုး-ကြွက်သားနာခြင်း၊
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = Tylenol ဟာ အမေရိကားမှာ အသဲအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်းရဲ့ နံပါတ် (၁) တရားခံဖြစ်သည်။
3. Vanquish (Aspirin + Acetaminophen)
Dose = 325 mg - 500 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၂့၂၅
Headache ခေါင်းကိုက်၊ Muscle ache ကြွက်သားနာ၊
4. Ibuprofen (Advil, Motrin, Nuprin) = NSAID
Dose = 200 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၂့၅
ကိုက်ခဲခြင်း၊ နာခြင်း၊ အအေးမိ၊ သွားကိုက်၊ ကြွက်သားနာ၊ ခါးနာ၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အလာဂျီရခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ဗိုက်အောင့်၊ ကိုယ်ဝန် တတိယ ၃ လနောက်ပိုင်း မပေးသင့်။
5. Naproxen sodium (Aleve, Naproxen) = NSAID
Dose = 220 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၃
ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါ အဆစ်-ကြွက်သားနာ၊ အဆစ်နာရောဂါ၊ (ရူမက်တစ်) ရောဂါ၊ အရိုး-ကြွက်သားနာ၊
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = နှလုံးရောဂါ၊ အစာအိမ်အောင့်၊ နို့တိုက်မိခင်တွေကို မပေးသင့်၊
6. Ibuprofen (Motrin 800) = NSAID
Dose = 800 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၃့၅
7. Ketoprofen (Actron, Orudis) = NSAID
Dose = 12.5 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၃့၆
ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါ ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်သက်သာစေရန်၊ နာခြင်း၊ အဆစ်နာ၊
- NSAIDs (2) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို လေ့လာခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/nsaid.html